Brighton Sango, Zwimbabwean 1958- 1995- 'Zindoga' (Hidden Feelings); green serpentine stone, 'Sango' carved onto the base of the sculpture, height 94cm, 187cm with plinth Note: Guruve Gallery, experts in Zimbabwean Shona Sculpture and representatives of the artist, have confirmed authenticity of this work. - Price Estimate: £2500 - £3500
Lot 99 of 160: Brighton Sango, Zwimbabwean 1958- 1995- 'Zindoga' (Hidden Feelings); green serpentine stone, 'Sango' carved onto the base of the sculpture, height 94cm, 187cm with plinth Note: Guruve Gallery, experts in Zimbabwean Shona Sculpture and representatives of the artist, have confirmed authenticity of this work.
Brighton Sango, Zwimbabwean 1958- 1995- 'Zindoga' (Hidden Feelings); green serpentine stone, 'Sango' carved onto the base of the sculpture, height 94cm, 187cm with plinth Note: Guruve Gallery, experts in Zimbabwean Shona Sculpture and representatives of the artist, have confirmed authenticity of this work.
Please refer to department for condition report Comes with a separate plinth with plaque and artist details on it carved surname onto the base of the stone